Sidee loo xiraa wadid adag | War gadget
Hadaad waligaa ubaahantahay inaad kumbuyuutarkaaga ku cusboonaysiiso qayb cusub sida awood aad u saraysa oo aad u adag, wax noqon kara hawl fudud sida saarista laba boolal oo dib loo dhigo, way ka dhib badnaan kartaa inta aan qiyaaseyno haddii aan haysanno waa inaan dib-u-dhigaa oo u daadiyaa dhammaan waxyaabaha ku jira qadiimkii hore ee adag ee kan cusub ee aan rabno inaan rakibno.
Runtu waxay tahay in qoraalkan waxaan rabaa inaan ku tuso siyaabo kala duwan si shaqadan looga dhigo mid aad ufudud leh oo ka sarreysa wax walba oo otomaatig ah. Runtu waxay tahay, tusaale ahaan, Windows wuxuu yareeyaa dhibaatadan maaddaama nidaamka qalliinka laftiisu isbeddelayo oo horumar sameynayo, in kasta oo, haddana iyo xaaladdan gaarka ah, waxaas oo dhami waxay kuxiran yihiin da'da qalabka laftiisa kaas oo lagu qalabey mishiinka aan ku shaqeyneyno.
Sida ku xusan cinwaanka, ka hor intaadan dib u cusbooneysiin dhammaan noocyada darawallada ama inaad dib u codsato adeegsadaha qaabkiisa, waxaan soo jeedinayaa inaan sameyno wadista wadista in aan hadda isticmaaleyno oo aan ku rakibeyno diskigeena cusub ee adag, wax naga badbaadin kara shaqo badan 'istaroog' maxaa yeelay waxay noo ogolaaneysaa inaan ku sii wadno nidaamka qalliinka diiwaangelintiisa cusbooneysiinta iyo xitaa barnaamijyadeena adeegsadayaasha iyo qaabeyn u gaar ah . Mar alla markii aan helno nuqul ka mid ah darawalkeenna adag oo leh farsamadan, waxaan ku daadin karnaa kombuyuutar kasta oo aan uga shaqeyn karnaa sidii inay iyagu yihiin.
1 Maxay tahay sababta loo adkeeyo wadista adag oo aan loo isticmaalin farsamo kale?
2 Shuruudaha loogu talagalay cloning drive adag
3 Clone wadista adag ee Windows 10
4 Clone waddo adag oo ku taal Ubuntu
5 Clone waddo adag oo ku taal MacOS
Maxay tahay sababta loo adkeeyo wadista adag oo aan loo isticmaalin farsamo kale?
Waqtigan xaadirka ah, waxaad hubaa inaad la yaaban tahay sababta aad u xiraneyso darawalkaaga adag oo aadan u isticmaalin qaab kale. Sababta loo samaynayo nuqulkan kaamil ah ee dirawalkeenna adag ee hadda socda wuxuu yeelan karaa dhawr sababood, dhinaca kalena waxaan ka heli karnaa a nuqul kaamil ah wadistayada adag in aan ku kaydin karno, tusaale ahaan, wadista dibadda ee adag si aan ugu adeegno keyd ahaan haddii ay dhacdo in darawgeena ugu weyn uu fashilmo waana inaan sii wadnaa inaan ku shaqeyno xoogaa deg deg ah.
Dhinaca kale, waa qaabka ugu fiican ee awoodda Macluumaadkeena ka soo qaad hal kombiyuutar illaa mid kale adigoon dib ugu rakibin wax walba nadiif. Tani waa wax in kastoo aysan u muuqan mid xiiso leh, ay aad uga badan tahay inta aad qiyaasi karto, gaar ahaan haddii aad ku talo jirto, sidaan horayba u soo sheegnay, inaad ku cusboonaysiiso mashiinkaaga awood aad u sarreysa oo adag ama haddii aan rabno inaan rakibno qalab cusub oo disk ah , halbeeg si weyn u hagaajinaya waxqabadka kumbuyuutarkayaga mahadnaqa xaqiiqda ah, sidaad dhab ahaan u ogtahay, tikniyoolajiyadda noocan ahi waxay siisaa kor u kac aad u sarreeya oo xagga waxqabadka ah tan iyo markii ay bixiso xawaare aad u sarreeya oo akhris iyo qoris ah.
Ugu dambeyntiina, waana wax shaqsiyan si weyn ii anfacay mararka qaarkood, waxay kuu ogolaaneysaa, tusaale ahaan, waxay leeyihiin nidaam isla hawlgal oo isku mid ah laba kombiyuutar oo gebi ahaanba kala duwan, kiiskeyga labo kumbiyuutar oo kala duwan. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad yeelato isla nidaamka aad ku shaqeyso, barnaamijyada isku midka ah, isla xogta isticmaaleha, isku qaabeynta… laba mashiin oo gebi ahaanba kala duwan.
Shuruudaha loogu talagalay cloning drive adag
Kahor intaanan kahadlin waxa qasab ah inaan rakibo ama waxa qasab ah inaanu hagaajino si aan ugu sii wadno xarkaha wadida adag ee aan wadno waa inaan tixgalino laba shay, waxaan ubaahanahay barnaamijka dhirta iyo, marka labaad, a gebi ahaanba nadiifi wadista adag Waa inuu ku xirnaadaa kombiyuutarka maadaama uu ku jiri doono cutubkan oo aan ku koobi doonno dhammaan macluumaadka.
Tan dambe ayaa sidoo kale leh cillado, taas oo ah, waxaan u baahanahay darawal adag oo ay tahay inuu haysto la mid ah ama xitaa ka weyn awoodda bilowga adag ee adag. Markaan kawada cadeeyno dhamaan qodobadan hore, waxaan si faahfaahsan u guda galaynaa sida loo isku xirxiro darawalkeena adag iyadoo kuxiran nidaamka qalliinka ee aan isticmaaleyno waqti kasta.
Clone wadista adag ee Windows 10
Si aad u dhexgeliso darawalkaaga adag Dabaylaha dabaysha 10 Waxaad u baahan doontaa, sidaan horayba ugu soo sheegnay safafkii hore, inaad wadato Hard Drive-kaaga cusub ee ku xiran Motherboard-kaaga. Marka aad sameyso talaabadan, waa inaad soo dejisaa Kaaliyaha Qeybta AOMEI. Waqtigan xaadirka ah, waa in la ogaadaa in ay jiraan qalabyo badan oo lagu xirayo wadista adag, shaqsiyan waan doortay tan maxaa yeelay waad u isticmaali kartaa adigoon ka soo galin pendrive, cd ama wax la mid ah.
Waxa intaa dheer kor ku xusan, wax ka dhigaya geeddi-socodkan mid aad u fudud oo ka sarreeya dhammaan habka xiisaha leh, qalabku wuxuu noo oggolaanayaa inaan qabanno noocyo kala duwan oo dheellitirnaan ah maxaa yeelay waxaad abuuri kartaa nuqul kaamil ah, oo ay ku jiraan qaybaha iyo kuwa kale, ama kaliya nuqul qaybta meesha aad ku rakibtay Windows.
Si aad u bilawdid cloning-gaaga adag, waxaan fureynaa barnaamijka Kaaliyaha Qeybta AOMEI. Marka barnaamijku socdo, waxaan tagnaa dhinaca menu oo guji qaybta ''Nuqul Qeyb'. Ficilkan waxaan ku helaynaa saaxir nuqul si aad u bilowdo, halkaas oo aad ku calaamadeyn doonto xulashada 'Nuqul disk deg deg ah'inaad gujiso'Xiga'. Waqtigan xaadirka ah, kaliya xulo xijaabka aan dooneyno inaan jajabino oo aan ku sii wadno hawsha. Ugu dambeyntiina, waa inaan kaliya doorannaa diskiga ama qaybinta isla halka nuqul lagu daadin doono.
Qoraal kama dambeys ah, waa in la ogaadaa in barnaamijkani uu bixinayo suurtagalnimada in la isku hagaajiyo cabbirka qaybta meesha aad rabto inaad ku daadiso dhirta. Si tan loo sameeyo waa inaad calaamadeysaa ikhtiyaarka ah 'Tafatir qoruhu'waxna ka beddel cabbirka iyada oo la adeegsanayo kuwa wax lagu dhejiyo. Markaad yeelato cabirka la rabay kaliya ku dhufo 'Xiga'oo guji'Dhameystir'. Tallaabooyinkan waxaad ku arki doontaa in hadda ay hawl cusub ka socoto qaybta 'Hawlgallada sugaya'. Haddii qaabeynta oo dhami ay sax tahay oo ay tahay waxa aad rabto, waa inaad gujisaa 'aplicar'in lagu dhammeeyo'Ku soco'.
Tallaabada xigta ayaa ah in kumbuyuutarku si buuxda toos ugu bilaabayo, markaa waa inaadan ka nixin ama ka welwelin waqtigan. Marka aad bilowdo, waad ogaan doontaa taas mashiinku wuxuu si toos ah u bilaabayaa software cloning taas ayaa bilaabi doonta ka shaqeynta. Inta howsha oo dhami socoto, waxba ha taaban ama dami kombiyuutarka, kaliya u ogolow arjiga inuu dhammeeyo shaqada.
Clone waddo adag oo ku taal Ubuntu
Ubuntu waa mid ka mid ah nidaamyada hawlgal ee ugu badan ee xilligan la joogo, gaar ahaan mahadnaqa bulshada ballaadhan ee ka dambaysa iyada oo isticmaale kasta uu had iyo jeer kuu soo bandhigi karo fikrad cusub oo ku saabsan sida loo sameeyo ficilada kala duwan, qaarkood way ka dhib badan yihiin, kuwa kalena way ka dhakhso badan yihiin inay qabtaan laakiin kulligoodna sida caadiga ah waa sida ansax ah oo xiiso leh.
Tusaale cad oo ah waxa aan idhaahdo waa sidaan awoodey ee aan ku heli karay sida loo xiro wadaha adag ee Ubuntu halkaas oo ay jiraan isticmaaleyaal adeegsada Codsiga dd, kaas oo badanaa lagu rakibo qaabeynta aasaasiga ah ee nidaamka qalliinka, halka kuwa kale, haddii ay dhacdo inaad rabto inaad nuqul ka sameyso dhammaan qalabka adag sida ay tahay, badanaa waxay ku sharraxaan nooc kale oo ficil ah.
Haddii waxa aad rabto aysan ahayn inaad isku adkayso naftaada maxaa yeelay waxaad u baahan tahay nuqul sax ah oo ah darawal adag oo aad ku rakibtay kombuyuutarkaaga, waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad ku xirto wadistaada cusub ee adag, xusuusnow inay tahay inay isku awood tahay ama ka weyn tahay mid ka badan kii aan horay u rakibnay oo aan dooneyno inaan nuqul ka sameysano. Marka ficilkan la fuliyo, waxaan kumbuyuutarka ka bilaabaynaa pendrive halkaas oo aanu ku rakibnay Ubuntu.
Markaan kumbuyuutarka bilownay, kaliya waa inaan furnaa gunta oo ka amri amarka sida ugu fudud:
Xaaladdan oo kale waa inaan ku beddelnaa cutubka tooska ah ee unugga isha, taas oo ah, unugga aan dooneyno inaan nuqul ka dhigno iyo Unit1 oo aan ku helno xarafka cutubka cusub, taas oo ah, diskiga cusub ee adag ee aan ku rakibnay nidaamka, halbeegga ku yaal qaybta aan dooneyno inaan ku kaydinno nuqulka. Qaabkan fudud Unit2 wuxuu noqon doonaa iskuxidhka Unit1.
Ikhtiyaar kale, sidaan idhi, waa isticmaal barnaamijka dd. Si loo ogaado haddii aan rakibnay, waa inaan fulinnaa amarka
Haddii aan rakibnay, waa inaan helnaa natiijo la mid ah / bin / dd. Marka hubintaan fudud la sameeyo waa inaan si sax ah u ogaanno meesha aad joogto iyo gaar ahaan waxa darawallada adag iyo qormooyinka aad ku haysato, tan ayaan ku fulineynaa
Amarkan wuxuu na siin doonaa oo keliya macluumaad ku saabsan darawallada adag ee aan rakibnay iyo qeybaha ay ka kooban yihiin. Waxa aan ku arki doonno terminal-ka waa nooc ka mid ah liistada uu ku qoran yahay magaca diskiga adag ee uu u qoondeeyay nidaamka qalliinka si uu ugu sii wado qaybtiisa suurtagalka ah. Marka magacyada loo qoondeeyay bilowga diskiga adag iyo midka cusub ee aan dooneyno inaan ku daadinno xogta ayaa la helay, waan fulinaa
Amarkani wuxuu leeyahay sharraxaad aad u fudud, haddii taa macnaheedu tahay feyl galinta, taasi waa, isha diskiga adag, halka loola jeedo faylka wax soo saarka. Sidii amarkii hore, waa inaan ku badalnaa suugaanta Unit1 magaca loo qoondeeyay diskiga adag oo leh xogta oo dhan, halka Unit2 ay tahay in lagu badalo suugaanta loo qoondeeyay diskiga adag ee aad rabto inaad nuqul ka dhigato.
Ugu dambeyntiina, haddii aan mar kale tartano
waad awoodaa iska hubi in disk-ka adag ee Drive2 uu si sax ah ula mid yahay Drive1.
Clone waddo adag oo ku taal MacOS
Marka laga hadlayo kumbuyuutarka Apple, runtu waxay tahay in cloning a drive adag waa mid aad u fudud. Ugu horreyntii, sida kuwii hore oo kale, waa inaan ku xirnaa cutubkeenna cusub mashiinka. Marka la isku xiro, waa inaan kaliya furnaa utility-ka cloning-ka, oo aad ka heli karto gudaha galka Codsiyada, gaar ahaan gudaha Dhaqaalaha.
Mar haddii korantadan ay furan tahay, waxaan gujineynaa darawgeena adag waxaanna dooranaa tab Qaybaha. Qeybtaan waxaan aadi doonnaa qeybta Qeybta Qeybta oo waxaan dooran doonaa '1 partition'. Xuquuqda dhamaadka shaashadda waxaa ku yaal goob la yiraahdo Ikhtiyaarro halkaas oo ay tahay inaan ka galno oo aadno 'Jadwalka GUID'. Qeybtaan waa inaad kaliya ka xaqiijisaa ogolaanshaha darawalkaaga adag oo guji 'Dayactir rukhsadaha diskka'. Ugu dambeyntii kaliya guji 'Hubi disk'.
Markaad fuliso dhammaan talaabooyinkan, waxaan dib u bilaabi doonnaa kumbuyuutarka adoo riixaya furaha Xulashada. Marka nidaamka lagu soo rogo disk-ka soo-kabashada. Marka nidaamku bilowdo, dhagsii ikhtiyaarka dib-u-rakibidda macOS oo dooro diskka aad u socoto. Nidaamkan dib u soo celinta oo dhan waxay qaadan doontaa ilaa 30 daqiiqo. Ugu dambeyntiina, markii dhammaan nidaamkani dhammaado nidaamku wuxuu na weydiin doonaa haddii aan rabno ka soo celi faylasha disk kaleWaqtigan xaadirka ah waa inaan doorannaa kii hore maadaama sidan oo kale dhammaan faylashaada shaqsiyeed laga soo guurinayo laga bilaabo dirawalkii hore ee adag ilaa midka cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Sida loo kabo darawal adag si fudud oo dhaqso ah
Kani wuxuu noqon karaa iPhone 8 haddii aan ku kalsoonaanno soo-deynta ugu dambeysay